********* ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်ပါဠိ *********
ဘလော့တင်သူ တင်အေးနိုင် at 8:30 PM
တင်အေးနိုင် September 29, 2011 at 8:31 PM
တင်အေးနိုင် March 20, 2013 at 7:36 AM
တင်အေးနိုင် March 20, 2013 at 7:37 AM
ယခုမိတ်ဆွေရေးသားသောမှတ်ချက်ကို စိစစ်ပြီးမှလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်တစ်ခေါက်လာမှ မိတ်ဆွေရေးသောမှတ်ချက်ဟာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ိDHAMMA RADIO CHANNEL 8 - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ
Click to play with other type of player
Followers မန်ဘာဝင်ပြီးတော့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်
......................... <!-kp3နည်းပညာ-http://kp3family.blogspot.com--> ....................................
ဖြူးဆရာတော် ဦးနရပတိ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ
သီလ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ
ဒီမှာမိမိရဲ့ CBox ကုဒ်ထည့်ပေးပါ
တရားတော်များ. Powered by Blogger.
© Copyright Network Name ဗုဒ္ဓဓမ္မတရားတော်များ.